अष्ट्रेलियामा विद्यार्थी जीवनको त्यो संघर्ष र आजको व्यवसायीक सफलता ! - Himalayan Kangaroo
Posted by Himalayan Kangaroo | ९ माघ २०७४, मंगलवार ०५:२१ |
मेलबर्न । नेपालबाट अष्ट्रेलिया आएर पनि नेपालीहरुले कडा मेहनत गरिरहेका छन् । जसले गर्दा उनीहरुले करियरमा मात्र नभई समाजमा समेत आफ्नो स्थान बनाउन सफल भएका छन् । त्यस्ता व्यक्तित्व मध्ये एक पर्नुहुन्छ , एनआरएनए अष्ट्रेलियाका पूर्व उपाध्यक्ष र हाल अष्ट्रेलियाको ब्रिसबेनमा नेपालका लागि पर्यटन दुत रहनुभएका ‘स्वतन्त्र प्रताप शाह’ ।
सन् २००४ मा विद्यार्थीको रुपमा अष्ट्रेलिया आउनुभएका स्वतन्त्र प्रताप शाह हाल अष्ट्रेलियामा आफ्नै व्यवसाय संगै सामाजिक कार्यहरुमा व्यस्त हुनुहुन्छ । ” म ब्याचलर लेभलमा अकाउन्टिंग पढ्न अष्ट्रेलिया आएको हूँ । त्यति बेला पढ्नको लागि विदेश हिंड्ने चलन त्यति विस्तार भएको थिएन र भिसा सहज पनि थिएन। मैले गुणस्तरीय शिक्षाको लागि अष्ट्रेलियालाई रोजें र भिसा पनि लाग्यो ।” उहाँ भन्नुहुन्छ , ” यहाँ आएपछि निकै संघर्ष देखें र त्यो संघर्ष मैले पनि भोगें । काम र पढाइलाई संगै व्यवस्थित गर्दै लैजाने चुनौती, एक्लोपन आदि सबै भोगाइ भोग्दै म यहाँसम्म आइपुगेको हूँ । मैले यहाँ आएर के-मार्टबाट काम गर्न सुरु गरेको हूँ ।”
सन् २००८ बाट व्यवसायिक यात्रा सुरु गर्नुभएका शाहका अष्ट्रेलियामा रेष्टुरेन्ट व्यवसाय, ट्राभल एजेन्सी र एइ ग्लोबल एजुकेशन एण्ड भिसा कन्सल्टेन्सी संचालनमा छन् । अष्ट्रेलियामा आफ्नो व्यवसायिक यात्राको बारेमा शाह यसरि बताउनुहुन्छ, ” म रिस्क लिन मन पराउने र आफै केही गर्नुपर्छ भन्ने स्वभावको हुनाले व्यवसाय गर्न सुरु गरेको हूँ । व्यवसाय गर्नकै लागि म सिड्नीबाट ब्रिसबेन बस्न थालें । व्यवसायमा रिस्क, प्रतिस्पर्धा भन्ने जहाँ पनि हुन्छ, यहाँ पनि छ। ” प्रतिस्पर्धाले व्यवसायीमा जोस जाँगर भर्ने, गुणस्तरीय र नयाँ सेवा दिनको लागि प्रयास गर्न घच्घचाउने उहाँ बताउनुहुन्छ। अष्ट्रेलिया र नेपालमा समेत आफ्नो व्यवसायलाई फैलाउंदै नेपाली युवाहरु, समाज तथा देशको लागि आफ्नो क्षेत्रबाट केही योगदान गर्ने उहाँको उद्देश्य रहेको छ ।
शाहका अनुसार अष्ट्रेलिया ‘सिस्टम’ मा चल्ने भएका कारण यहाँ व्यवसाय सुरु गर्न र काम गर्नको लागि सजिलो छ । तर, यहाँ व्यवसाय टिकाइ राख्नको लागि भने कडा मेहनतका साथ लगनशील भएर काम गर्नैपर्छ । अष्ट्रेलियामा व्यवसाय गर्न चाहने नेपाली युवाहरुलाई शाह भन्नुहुन्छ, ” अष्ट्रेलिया आउँदा हामीले के लिएर आएका थियौं र हामीलाई के गुमाउनु छ र ? त्यसैले निर्धक्क संग व्यवसाय गरौँ । आर्थिक समृद्धिले परिवार, सामाज र देश समृद्ध बनाउँछ । त्यसैले युवाहरु व्यवसायमा लाग्नु जरुरि छ । अष्ट्रेलियामा व्यवसाय गर्न चाहने नेपाली युवाहरु आफ्नो पाइला अगाडी बढाउनुहोस्। हजुरहरुलाई साथ दिनको लागि हामी छौं । “
Previousराष्ट्रियसभा निर्वाचनका मतदाताको अन्तिम नामावली आज सार्वजनिक गर्दै
Nextफिटनेसको लागि दीपिका पादुकोणको खाना देखी व्यायाम सम्मको यस्तो रुटिन
फेसबुक,ट्वीटर र युट्युव चलाउनेलाई कर उठाउने सरकारको तयारी
२८ श्रावण २०७५, सोमबार ०५:५६
सोमालियामा भएकाे शक्तिशाली विस्फोटमा १४ को मृत्यु
१२ कार्तिक २०७४, आईतवार ०२:०१
अष्ट्रेलियााको सिड्नीमा आँधी र वर्षाका कारण १ को मृत्यु,जनजीवन कष्टकर बन्दै
१२ मंसिर २०७५, बुधबार ०१:२५